Gbasara Anyị - Wuxi Zhongshuo Machinery Co., Ltd.
Ngwa inyeaka maka eriri igwe n’igwe eriri igwe
SPL-mpempe akwụkwọ gaa na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
PGL-na-egweri ụzọ na -eme ka mma
Igwe eji enyocha enyo enyo maka igwe anaghị agba nchara
Igwe eji enyocha enyo enyo maka igwe mpịakọta mkpuchi na mpempe akwụkwọ
Igwe eji eme ncha eji eme ihe maka HL Emecha
Ikpọ Njikọ Vacuum Cup Group
Igwe mkpuchi ihe mkpuchi PVC akpaaka zuru ezu
Igwe nhicha & Nchacha
Eletriki na akpaaka maka akara zuru oke
Ọkachamara maka ite egwuruegwu nke Abrasives Belt na-egweri maka igwe: Ebumnuche a na-eduzi anyị idobe nyocha n'ọhịa na-egweri ọla ma na-egbu egbu site na nkwụchi mkpuchi site na 1990s. N'afọ 2005 anyị bidoro ibụpụta, ịkpụpụta ma chịkọta igwe na-akpụ igwe na igwe maka igwe. Site na mgbasawanye azụmahịa na-aga n'ihu na mgbanwe nke ndị na-eketa òkè, na afọ 2015, Wuxi Zhongshuo Machines Co., guzobere.
Anyị bụ ndị nwere ụlọ ahịa jisiri ọkara-ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ dị na Wuxi City, Jiangsu Province. Isi obodo edebanyere aha bụ nde Euro 1. Igwe eji eme ihe ncha. Mpaghara owuwu ihe karịrị 7000 m2. Onu ogugu nke ndi oru kariri iri isii, nke gunyere 1 injin inyocha, 2 ndi injinia di elu na ndi injin 5. Anyị nwere ndị ọrụ aka ịchepụta, imepụta, ịchịkọta, nrụnye, inye ọrụ na ndị otu ọrụ ndị ahịa. Anyị na-emepụta igwe na-egwe osisi na -emegharị ọnụ na polishing, igwe na-eme brushing.igwe nchacha igwe, igwe na - eme ihe eji eme ihe, igwe na - eme ihe maka igwe ihe eji eme ihe na mpempe akwụkwọ, tinyere ntinye na ụzọ ọpụpụ nke CGL (Coil to Coil Repairing Grinding Line maka igwe na - atụgharị) na igwe (CPL (Coil to Coil Polishing Line for Service Center), ya bụ, Unwinder, Ntugharị, adinggbọ a na-ebu, Pinch Roll, Flattener, Mkpụrụ ihe ọkụkụ, sistemu na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, nhicha na nhicha, Mist mkpokọ, usoro ọgụ ọkụ. Anyị na-ewepụtakwa Ngwaọrụ a na-eji Vacuum Cups Group maka Sheet ruo Line Shein.
Ndepụta akwụkwọ anyị gụnyere Tisco Daming, Wuxi Puxin, Zhejiang Bohai, Western Titanium, Shinva Medical Instrument na ndị ahịa China ndị ọzọ ama ama. Anyị na-ebugharị ngwaahịa anyị na mba Europe dịka Italy, Turkey na asambodo CE. Anyị na-ewetakwara ndị China onye na-eweta ihe nrịbama nke ihe ntụtụ.
Imepụta uru maka onye ahịa bụ ihe anyị na-achụ mgbe niile. Afọ ojuju gị bụ ike nke ihe ọhụrụ anyị na-aga n’ihu.
Establishmentlọ ọrụ ụlọ ọrụ
Isi obodo aha
banyere anyị ahịa netwọk ịkpọtụrụ anyị ọrụ
zhongshuomach ígwè @ 163.com
Ngwaahịa egosipụtara - Ebe nrụọrụ